MRB na mkpado ink ọnụ ahịa HL420
Ọnụ ego e-ink nha: 4.2"
Njikọ ikuku: ugboro redio subG 433mhz
Ndụ batrị: ihe dị ka afọ 5, batrị enwere ike dochie ya
Protocol, API na SDK dị, Enwere ike itinye ya na sistemụ POS
Ogo akara ESL site na 1.54" ruo 11.6" ma ọ bụ ahaziri ya
Nchọpụta ọdụ ọdụ dị ihe ruru mita iri ise
Agba nkwado: Black, White, RED na Yellow
Ngwa ngwanrọ na netwọkụ kwụụrụ onwe
Ndebiri edeburu ụzọ maka ntinye ngwa ngwa
Na-emekarị ihe anyị na-akpọ e ink price mkpado na e akwụkwọ ọnụahịa mkpado bụ n'ezie otu ngwaahịa, ma a na-akpọ ha dị iche iche.
N'ihi na anyị e ink price mkpadodị nnọọ iche na ngwaahịa ndị ọzọ, anyị anaghị ahapụ ozi ngwaahịa niile na webụsaịtị anyị ka ị ghara iṅomi. Biko kpọtụrụ ndị ọrụ ahịa anyị na ha ga-ezitere gị ozi zuru ezu.
A na-ejikarị mkpado ESL inch 4.2 na ihe nkiri dị ka nnukwu ihe na ngwaahịa mmiri.
Mkpado ọnụahịa inkna-esiwanye eji na isi ụlọ ahịa. Site n'ịkwalite ọkwa ọgụgụ isi nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe, a na-enwewanye mmasị maka nchịkọta ozi na teknụzụ netwọk ngosi. Dị kae ink price mkpadonwere ike oriri dị ala na njikwa ozi dị mma, ọ dabara maka ngosipụta ozi na nnukwu ụlọ ahịa na ụlọ ahịa. Ngwa dị na nnukwu ụlọ ahịa na-abawanye ụba, ọkachasị nleba anya ozi na ngosipụta nke ozi na ngwa enweghị akwụkwọ, ngwa njikwa ụlọ ahịa smart, yana ọdịnaya ngosi. e ink price mkpado a na-achịkwakarị site na nzikọrịta ozi ikuku. Ugbu a, ezigbo oge nkwurịta okwu nkee ink price mkpado dabere na teknụzụ dị ka 433MHz.
Nke mkpado ọnụahịa inkA na-etinye ya n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè PVC pụrụ iche (a na-edozi ụgbọ okporo ígwè na shelf), ọ nwekwara ike ịtọ ya n'ụdị dị iche iche dị ka ịkwanye, nkochi ma ọ bụ ịgbanye. Nkemkpado ọnụahịa ink usoro na-akwado ime akara, na isi ụlọ ọrụ nwere ike ijikwa ọnụ ọnụ price mkpado nke commodities nke ya yinye alaka site netwọk. Enwere otutu ozi gbasara ngwaahịa dabara adaba echekwara n'ime, onye na-ere ahịa nwere ike lelee ma lelee ngwa ngwa site na enyemaka nke smart handheld ngwa ngwa.
Tụnyere ya na mkpado akwụkwọ ọdịnala, e akwụkwọ ọnụahịa mkpado nwere uru doro anya.
1. Enwere ike ime nkwenye data iji gbochie mmejọ ma ọ bụ nkwụsị
2. E akwụkwọ ọnụahịa mkpado nwere mgbochi izu ohi na mkpu ọrụ
3. Ikike imekọrịta mgbanwe na nchekwa data
4. E akwụkwọ ọnụahịa mkpado nwere ike ibelata oghere nchịkwa, mee ka njikwa dị n'otu na nleba anya nke ọma nke isi ụlọ ọrụ etiti, si otú ahụ belata ụgwọ ọrụ ọrụ, ụgwọ njikwa, wdg.
5. E akwụkwọ ọnụahịa mkpado ga-eji nwayọọ nwayọọ ghọọ ihe na-emekarị ụlọ ọrụ n'ihi na ọ na-ahapụ mkpado akwụkwọ omenala ma na-eji ihe nchekwa gburugburu ebe obibi na nchekwa ike, nke nwere ike imeziwanye ihe oyiyi ụlọ ahịa, afọ ojuju ndị ahịa na nkwenye ọha na eze maka ụlọ ahịa, ụlọ nkwakọba ihe, ngwa agha na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
Oji, ocha, edo edo
Ọnọdụ okpomọkụ na-arụ ọrụ
Anyị nwere ọtụtụ E akwụkwọ ọnụahịa mkpado n'ihi na ị na-ahọrọ na, e nwere mgbe ọ bụla nke dabara gị! Ugbu a ị nwere ike ịhapụ ozi bara uru gị site na igbe mkparịta ụka dị na akuku aka nri ala, anyị ga-akpọtụrụ gị n'ime awa 24.
FAQ nke sistemụ mkpado ọnụahịa ink E
1.HEnwere ọtụtụ ụdị enwere maka mkpado ọnụahịa ink nke nha inch 4.2?
Enwere ụdị abụọ. Ọ bụrụ na eji ya maka ngwa ahịa nkịtị, anyị ga-eme mkpado ọnụahịa e ink nkịtị. Ọ bụrụ na a na-eji ya maka ngwaahịa mmiri ma ọ bụ ngwaahịa oyi kpọnwụrụ, anyị ga-eme mkpado ọnụahịa ink enweghị mmiri
2. Batrị nke 4.2 inch e ink price mkpado na-eji ọ buru ibu karịa nke mkpado ọnụahịa e ink izugbe?
Batrị ahụ bụ otu, ọ bụghị nnukwu, na otu ihe nlereanya bụkwa ihe mba ụwa bọtịnụ batrị cr2450
3. Abụ m onye na-ere ere. Ị nweghị ike igosipụta akara MRB gị na mkpado ọnụahịa e akwụkwọ?
Dị ka e ink price mkpado na-ebubata, e niile e akwụkwọ mkpado price mkpado nke e si na anyị E ngwaahịa mkpado ọnụahịa mkpado bụ na-anọpụ iche nkwakọ na-enweghị anyị logo. Anyị nwekwara ike hazie akara ngosi gị ma mado ya na mkpado ọnụahịa e akwụkwọ.
4. Nwere ike e akwụkwọ ọnụahịa mkpado igosipụta otutu agba?
Anyị nwere ike igosipụta agba atọ n'otu oge. Enwere ike igosipụta oji, ọcha, odo, oji, ọcha na uhie.
5. Achọrọ m ịzụta setịpụ ihe ngosi ngosi nke mkpado ọnụahịa e akwụkwọ maka ule. Ogologo oge ole ka ọ ga-adị?
Anyị nwere nnukwu ngwa ahịa. Mgbe ị nwetasịrị ụgwọ nlele, anyị nwere ike ibuga ngwa ahịa ozugbo. N'otu oge ahụ, anyị nwekwara ike ịkpọtụrụ gị kacha mma ibu.
6. Olee ụdị software e ink price mkpado nwere? Kedu ka esi akwụ ụgwọ?
E kewara ngwanro anyị ka ọ bụrụ ngwanrọ beta ngosi, sọftụwia guzoro naanị ya na ngwanrọ netwọkụ. Biko kpọtụrụ ndị ọrụ m na-ere ahịa maka ndụmọdụ.
7. Kedu size e ink price mkpado ị nwere? Ọ bụ 4.2 inch kacha nha?
Anyị nwere 1.54, 2.13, 2.9, 4.2, 7.5, 11.6 inch na ọbụna ndị buru ibu nke enwere ike ịhazi ya. Nabata ịkpọtụrụ anyị maka ndụmọdụ.
* Maka nkọwa nke mkpado ọnụahịa ESL nha ndị ọzọ biko gaa na: https://www.mrbretail.com/esl-system/
MRB e ink ọnụahịa mkpado vidiyo HL420
Nke gara aga: Sistemụ mkpado ọnụahịa MRB ESL HL290
Osote: Sistemụ akara akara MRB ESL HL750
E Ink ọnụahịa mkpado
e ink price mkpado emepụta
e ink price mkpado suppliers
e ink price mkpado usoro
e ink price mkpado
e ink mkpado
E Mkpado ọnụ ahịa akwụkwọ
e akwụkwọ ọnụahịa mkpado usoro
e akwụkwọ ọnụahịa mkpado
ESL na ink
Mkpado ọnụahịa Esl
MRB ọnụahịa dijitalụ HL154
MRB ESL ọdụ ọdụ HLS01
MRB eletrọnịkị mkpado HL213F maka nri oyi kpọnwụrụ
Sistemụ akara shelf eletrọnịkị HL213